Maitiro ekumisikidza maviri Factor Kusimbiswa mune yako Apple account | IPhone nhau
IPad nhau | | iOS 10, iPad, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kunyangwe Double Factor Kuvimbiswa kwave kuripo kwenguva yakareba, vazhinji vashandisi veApple havasati vazviziva, kana kuti vakagara neyekutanga-nhanho yekuongorora, iyo kunyange ingaite senge yakafanana, inzira mbiri dzakasiyana dzekuchengetedza. Mbiri-Factor Kuvimbiswa ikozvino inova inofanirwa-kuve yezvimwe zvinhu zvitsva muMacOS Sierra, iOS 10, uye watchOS 3, sekuzarura Mac yako neApple Watch. Ndokusaka tichikuratidza maitiro aungaigadzirisa uye wotanga kushandisa aya matsva mashandiro nekukurumidza pavanongowanikwa kune wese munhu.
1 Dzima XNUMX-Nhanho Verification
2 Gonesa maFactor-Factor Kusimbisa pane yako Mac
3 Gadzira Mbiri Yekusimbisa Kusimbisa kubva kune yako iPhone kana iPad
4 Izvo zviviri Factor Chivimbiso chinoshanda sei?
Dzima XNUMX-Nhanho Verification
Chinhu chekutanga chauchazofanira kuita ndeche dzima mbiri-nhanho Verification kana iwe uchinge waigonesa. Enda kune yako Apple account peji (batanidza apa) uye muchikamu cheChengetedzo, regedza maviri-Nhanho Verification. Iwe uchafanirwa kugadzirisa mhinduro dzekuchengetedza zvakare, asi chiitiko chinongotora miniti.
Gonesa maFactor-Factor Kusimbisa pane yako Mac
Enda kune ino sisitimu inofarira mapaneru uye Muchikamu cheICloud, tinya pane "Akaundi ruzivo", pamwe pazasi peiyo mufananidzo mufananidzo.
Mukati me "Security" tab iwe uchaona, pasi, sarudzo "Gadzira mbiri-chinhu chechokwadi", tinya pane iro bhatani kuti utange maitiro ekugadzirisa. Dzvanya zvakare pane bhatani "Gadzira" rinoonekwa muhwindo idzva uye uteedzere matanho enzira yacho kusvika kumagumo. Paunenge wapedza, iwe unenge uine maFactor Factor Authentication akaiswa muaccount yako, uye Mac yako sechigadzirwa chakavimbika. Iwe uchafanirwa kuongorora mamwe ese madhizaivhi kubva kuMac yako kuti uawedzere iwo semidziyo yakavimbika.
Gadzira Mbiri Yekusimbisa Kusimbisa kubva kune yako iPhone kana iPad
Maitiro acho anenge akafanana neayo akatsanangurwa pakutanga paMac. Pinda zvaunofarira zvehurongwa, enda kune chikamu cheICloud wobva wadzvanya kuaccount yako, iko kune iyo pikicha yemufananidzo. Wobva wasarudza iyo "password uye chengetedzo" chikamu, uye iwe uchaona iyo "Mbiri-chinhu chechokwadi" chikamu, icho kwandiri ini chakatoitwa nekuti ndakazviita pamberi paMac. Tevedza nhanho kusvika kumagumo uye uchave uine nzira yekuchengetedza yakaitwa.
Izvo zviviri Factor Chivimbiso chinoshanda sei?
Kana iwe uchida kuisa yako iCloud account, Apple, kana kuwedzera chero nyowani chishandiso kuaccount yako, iwe uchagara uchifanira kuzviongorora zvisati zvaitika kubva kune ako eakavimbika maturusi Kuti uite izvi, pamidziyo yako yaunovimba, hwindo senge iro rauri kuona richaonekwa, mairi Kwete chete iyo inokuudza iwe kuti kune mumwe munhu ari kuyedza kupinda muaccount yako, asi zvakare vanokuratidza nzvimbo, uye kana iwe uchibvuma ivo vanokupa iyo yekuongorora kodhi inodikanwa kuti uwedzere icho chitsva chishandiso kana kuisa yako Apple account. Nzira yakachengeteka yekuchengetedza account yako inokurudzirwa zvakanyanya kuti ushandise, saka kana usati watoishandisa, ino ndiyo nguva kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Maitiro ekugonesa maviri Factor Kusimbiswa pane yako Apple account